Maraykanka oo ka baxaya heshiiskii gantaalada riddada dhexe ee ay Ruushka la galeen. – KHAATUMO NEWS
Maraykanka ayaa isaga baxaya heshiiskii gantaalada balaastikada ee ridada dhexe ee xanbaara Nukliyeerka (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ee ay kula jireen dalka Ruushka.
Wakaalaa Wararka ee AP ayaa sheegtey in Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu yiri Ruushku waxa uu ku xadgudbey heshiiskii ay galeen, waxaana ay hormarin iyo isbeddel ku sameeyeen hubkoodi.
“Waxaan dooneynaa inaan joojino heshiiska, ka dibna waxaan samayn doonnaa horumarinta hubkayaga haddii aan Russia iyo Shiinuhu aysan oggolaan heshiis cusub” ayuu yiri Trump oo ka qaybgalay isu so baxa olole doorasho oo ka dhacay gobolka Nevada.
Go’aanka Donald Trump ayaa imaanaya iyada oo telefishanka CNN uu todobaadkan soo bandhigey isbeddel weyn oo Nukliyeerka Ruushka lagu sameeyey gobolka Kaliningrad ee aan xuduudka la lahayn Ruushka intiisa kale, una dhexeysa Lithuania iyo Poland.
Heshiiska INF waxaa kala saxixdey Madaxweynayaashii Maraykanka Ronald Reagan iyo Madaxweynihii Midowga Soofiyeetiga Mikhail Gorbachev sanadkii 1987, Gantaalada Balaastikada ah in aan dib loo sameyn lana hor marin ee lagu heshiiyey ayaa ridadoodu gaareysaa 500 – 5000km
Ka bixitaanka Maraykana ee heshiiska gantaalada riddada dhexe ayaa keeni kara tartan cusub o dhanka hubka ah kaas oo caalamka khatar gelin kara.
Previous Post: Deg Deg::Turkiga oo soo bandhigaya Cadeynta Sidii loo dilay Jamal Khashoggi
Next Post: War Deg Deg Ah;Boqorka Beelaha Daarood Oo Gobolka Sanaag Gaadhay,